यि सुन्दरी ज’सले संसारकै लामा दारी पा’लेर राखिन् किर्तीमान, को हुन् ती आखिर ?
Homeसमाचारयि सुन्दरी ज’सले संसारकै लामा दारी पा’लेर राखिन् किर्तीमान, को हुन् ती आखिर ?
April 21, 2021 admin समाचार 5886
तस्बिरमा देखिएकी यि युवती पुरु’ष हुन की महिला पहिलो पटक देख्ने मान्छे हेरे’को हेर्यै हुन्छन् । झुक्न्छिन् । तर उनी विश्वकै सबैभन्दा लामा दारी भएकी मोड’ल युवती हुन् ।
बेलाय’तकी मोडल हारनाम कुराको दाह्री ६ इञ्च लामा दाह्री छन् । तिनै दारीले उनलाई विश्ववि’ख्यात बनायो । हारनामले सवैभन्दा लामो दाह्री भएकी महिलाका रुपमा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेक’र्डसमा नाम लेखाएकी छिन् । मोडल हा’रनामको शरीर अन्य महिलाको जस्तै भएपनि उनको अनुहा’रभरि पुरुषको जस्तै दाह्री छ ।
यो पनि,अलैं’ची खेती गरेर लखपति बनेका यि कृषक भन्छन् ‘ज्याननै हत्केलामा राखेर विदेश जानु पर्दैन’ धनपती भण्डा’री अलैंची किसान हुन् । उनी सिन्धुपा’ल्चोकको हेलम्बु गाउँपािलका वडा नम्वर २ मा बस्दै आएका छन् । उनले बिगत सात बर्षदेखि आफ्नै बारी’मा अलैंची खेती गर्दै आएका हुन् । ‘पहिला पनि हामी कि’सान थियौं ।’ उनले भने ।
धान फल्ने खे’तमा अलैंची लगाएर आफुले ठिक गरेको उनको भनाइ छ । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइ’एको अलैंची खेतीबाटै अहिले उनको घर’खर्च चलेको छ । धान रोप्दा हुने फाइदा भन्दा अलैंचीबाट दोब्बर फाइदा भएको उनले बता’एका छन् ।
यसअघि अ’लैंचीको राम्रै मुल्य पर्ने भएपनि अहिले बिचौलियाका कारण किसानहरु मारमा परेको भन्दै उनले गु’नासो गरेका छन् । निरन्तर पानी बगिराख्ने, ओ’सीलो भिरालो र उत्तर फर्किएको ज’ग्गामा अलैंची खेती असाध्यै राम्रो हुने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नु’स्े,मुम्बई । श्रीलंकन मूलकी बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज ३६ वर्षकी भइन् । २००६ को मिस युनि’भर्स श्रीलंका पिजेन्टको ताजसमेत जितेकी उनी मल्टी एथनिक परिवारकी सदस्य हुन् । उनका पिता श्रीलंकन र आमा मले’सियन हुन् ।
अभिनेत्री तथा मोडल ज्या’कलिनले बहरिनमा पढेकी हुन् । उनले अस्ट्रेलि’याको सिड्नी विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार विषयमा स्नातक गरेकी छन् । टेलिभिजन रिपोर्टरको अनुभव लिइसकेकी ज्याक’लिनलाई विभिन्न भाषाको ज्ञान छ । उनले स्पेनिस, फ्रेन्च र अरेबिक भाषा राम्रोसँग बोल्न र लेख्न सक्छि’न् ।
ज्याकलि’नका पहिलो प्रेमी बहरिनका राजकुमार बिन रासिद अल खलिफा थिए । ज्याकलिनसँग ब्रेकअपपछि राज’कुमारले एक गीत एल्बम रिलिज गरेका छन् जस’को नाम ‘जैकी’ राखेका थिए । ज्याकलिन र सलमान निकै नजिकका साथी हुन् । सलमानले ज्याकलिनलाई बान्द्राको ३ बिएचके अपार्टमेन्टमा बस्न आग्रह गरेका थिए तर उनले अस्वी’कार गरेकी थिइन् ।सौय दैनिक’मा खबर छ ।
यसैबीच विश्व’व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा अभिनेता सलमान खान आफ्नो फार्म हाउसमा बसे । उनीसँगै अभिनेत्री ज्या’कलिन र उ’नका सहयोगीहरु पनि फार्महाउसमै बसेका थिए । अभिनेता सलमान सोमबारमात्रै आफ्नो घर फर्किए । मंगल’बार अभिनेता ज्याकलिनले आफ्नो जन्मदिन मनाइन् । उनको जन्मदिनको अवसरमा निर्माता तथा निर्देश’क साजिद नाडियाडवालाले चलचित्रको घोष’णा गरेका छन् ।
साजि’दले चलचित्र ‘किक २’ बनाउने घोषणा गरेका हुन् । चलचित्रमा अभिनेत्री ज्याकलिनको साथमा अभिनेता सलमा’नको मुख्य भूमिका रहने जनाइएको छ । निर्माता तथा निर्देशक साजिदले चलचित्रको कथा फाइनल गरेका छन् । कथा फाइन’ल गरेसँगै उनकी श्रीमतीले ज्याकलिनलाई जन्मदिनमा चलचित्र नै गिफ्ट गरेकी हुन् । चलचित्रको छायां’कन चाँडै नै सुरु गर्ने साजि’दले बताएका छन् । अभिनेता सलमान र अभिनेत्री ज्याकलिन अभिनीत चलचित्र ‘किक’ ले बक्सअफिसमा राम्रो कमाइ गरे’को थियो । ओएस नेपालबाट
आज एकै दिन १ हजार ३०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य हे’र्नुहोस् कति पुग्यो त?
धर्ती माताले पत्रकारलाइ त ‘रबार देखाएपछि, आश्रममा यस्तोसम्मको शक्ती दे’खियो (हे’र्नुहोस् भिडियो)
August 18, 2020 admin समाचार 48091
कहिले’काहीँ रुँदा तपाईं’लाई आनन्द आउँछ ? विशेष गरी रुइँ सकेपछि मानिस’हरुलाई मनमा आनन्द आउँछ । तर रुवाइका पनि विभिन्न पोटोहरु हुन्छन् । रुनु ठीक हो भन्नु हुन्छ भने यस’बारे बुझिराखौँ । रुनु ठीक हो भन्नुका
November 8, 2020 admin समाचार 9351
सुरुमा यस्तो अ’वस्थामा यसरी भेटिएका थिए- सचिन परियार (भिडियो हे’र्नुहोस)
May 8, 2021 admin समाचार 5573
श्रीमती ह’राएको करिब दुई महिना पछि गोबिन्द कुँवरले श्रीमती फेला पारेका छन् । आफु भन्दा धनी परि’वारको छोरीसंग विवाह गरेका गोविन्द कुँवर ५ वषएको छोरा बोकेर मिडिया सामु खो’जीका लागि पुगेका थिए । भिडियो समाचारको